Nwatakịrị ahụ na-enweghị nsogbu mgbe ọ gbasịrị 9 mita "Ahụrụ m na Jizọs gwara m ihe maka mmadụ niile" | Blọọgụ nke ekpere
Ahụghị nwatakịrị ahụ ka ọduọ nke mita 9 "A hụrụ m ka Jizọs gwa m otu ihe maka mmadụ niile"
Paolo Tescione	Edere ya June 8, 2020 June 8, 2020
Annabel, nwa agbọghọ ahụ nwụrụ n'ụzọ ọrụ ebube mgbe ọ nwụrụ
Na nke mbụ ya na ndụ ya, Annabel nwere ike iri nri siri ike ma nne ya chere na nke a bụ ọrụ nke Jizọs .. Na Disemba afọ 2011, Annabel nọ na-egwuri egwu na mpụga ụlọ nke ezinụlọ ya na Texas na nwanne ya nwanyị Abigail, bụ onye dị afọ 14 ugbu a na Adelynn, ugbu a afọ 10, mgbe ọ na-amị daa wee daba na poplar oghere.
Nwada Wilson Beam kwuru, "O tiri isi ya ugboro atọ mgbe ọ na-agbadata, nke a kwekọrọ na nsonaazụ nyocha MRI."
A kpọgara nwatakịrị nwanyị ahụ ozugbo na atlọ Ọgwụ Cook ụmụaka na Forth Worth ebe helikopta rutere. N'ịtụ egwu kachasị njọ, ndị dọkịta guzobere ọnụ ụlọ nlekọta ahụike maka ọbịbịa Annabel - mana, n'ụzọ dị ịtụnanya, ọ lanarịrị na enweghị ọkọ.
N’ụbọchị na-esochi ihe mberede ahụ, Annabel malitere ikwu banyere ọhụụ okpukpe ndị a hụrụ n’oge ọ nọ n’amaghị ama. Ọ gwara ndị mụrụ ya: “Agara m n'eluigwe mgbe m nọ n'osisi ahụ. Mgbe m gafesịrị, echetara m mgbe m hụrụ otu onye nche si n’eluigwe, ọ dị ka akụkọ. Ọ bụ Chineke gwara m okwu site n'aka ya, ahụkwara m ọnụ ụzọ ọlaedo nke Eluigwe. Ozugbo ọ ruru ebe ahụ, ọ sịrị, 'Ugbu a, m ga-ahapụrụ gị, ihe niile ga-adị mma.' M wee banye nọdụ na Jizọs, o nwere uwe ọcha, ọchịchịrị odidi na ogologo ntutu na ajị agba. Ọ sịrị, 'Ugbu a abụghị oge unu.' M hụkwara nne nne Mimi. "
Nwada Wilson Beam kwuru, "Achọpụtara m mkpebi siri ike Anna ịkọrọ anyị ihe nzuzo anyị.
← Na post gara aga Gara aga post:Mkparịta ụka mụ na Chineke "anaghị ele anya n'ọhụụ"
Ọzọ Post → Post ozo:Ntughari uche taa ta ka uzo gi si emeghe nzube Chineke na ndu gi